I-Rockside Retreat! Relax phakathi kwepine & poplar.
Great Falls, Manitoba, Canada
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSandy
Indawo entsha eyakhiweyo, eqaqambileyo & yangoku. Ucocekile, uthule kwaye uyaphumla. Indawo efanelekileyo yokubalekela isixeko!
I-1100+ square foot cabin inamagumbi okulala ama-3 anembono evulekileyo yokuhlala kunye neendawo zokutyela. Igqibelele ukonwabisa! Indawo yokuphumla kwindawo enkulu ejonge emazantsi ukuze ugcakamele ilanga, i-BBQ, okanye ukonwabele indawo yokutshisa umlilo nosapho okanye nabahlobo. Idesika yabucala eyongezelelweyo ngaphandle kwegumbi lokulala eliphambili.
Ikhitshi: Izixhobo ezitsha zentsimbi engatyiwayo, kubandakanya ukuhlamba izitya, umenzi wekofu, imicrowave, iketile, zonke izitya kunye nezinto zokupheka ezibonelelweyo.
Izihlalo ezininzi zangaphakathi nangaphandle. Yonke ifestile ivumela iimbono ezintle zelitye eliveziweyo laseCanada kunye nemithi.
I-Rockside Retreat iza nazo zonke izinto eziluncedo kunye nezinto eziluncedo zekhaya. Qaphela: I-WIFI ayikafakwa, kodwa kukho ukugqunywa kweselula kwe-LTE okugqwesileyo kwipropathi nakwindawo. (Khuphela iimuvi kwifowuni yakho okanye ilaptop kwaye uqhagamshele iTV ngeHDMI okanye ifowuni yakho kumabonwakude usebenzisa iAdapter yeDigital AV ekwindawo leyo).
Nceda uqaphele ukuba le ndlu yakhiwe phezu kwayo kwaye ijikeleze imbonakalo yomhlaba yendalo. Isilumkiso siyacelwa kwipropati. Ukusebenzisa nayiphi na enye into ngaphandle kweendlela ezichaziweyo nezicacileyo kumngcipheko wakho.
Ukuqaliswa kwesikhephe sikawonke-wonke kuyafumaneka. Paka isithuthi sakho apho imini ngelixa ukonwabela amanzi.
Kukho isakhiwo esikhulu sokudlala esikufutshane sokonwabisa abancinci.
Kufuphi negesi, ivenkile eluncedo kunye nerestyu.
2 x 10 ft iiKayaks ezikhoyo ukuba zisetyenziswe xa uceliwe. (Nceda uze ne(e)ibhatyi zobomi ukuze uqinisekise ukuba kufanelekile).
Iipali zokuhamba ziyafumaneka
Iinkuni zokubasa zibonelelwe
21 min drive ukuya ePinawa Dam
30 min drive ukuya Pinawa Suspension Bridge
32 min drive ukuya ePinawa Channel Float & Paddle
27 min drive ukuya eGranite Hills Golf Club
Imizuzu engama-20 yokuqhuba ukuya kwiKlabhu yeGalufa yeBhere
Imizuzu engama-24 ukuya eLac du Bonnet
22 min drive ukuya Blueberry Rock Trail (1.8 km trail)
I-33 min drive ukuya kwi-Agassiz Forest Loop (4.5 km trail)
40 min drive ukuya kwiSeven Sisters Falls (3.1 km trail)
Jonga i-app ye-All Trails yezinye iindlela ezikuloo ndawo kunye neemeko ezininzi ezihlaziyiweyo kunye nobunzima bokulinganisa.
I love hitting the hiking trails with my sidekick @adventures_of_luna_grey.
Ndihlala ndifumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo ngefowuni okanye ngetekisi. Ayizukubakho kwindawo, ukuvumela ubumfihlo bondwendwe.